Maitiro ekuchinjisa data kubva kune imwe iPhone uchienda kune imwe | IPhone nhau
Maitiro ekuchinjisa data kubva kune imwe iPhone uchienda kune imwe
Iyo nguva yegore inouya apo vashandisi vazhinji vanovandudza yavo iPhone, uye izvo zvinoreva kuve nekumisazve. Dzorerazve zvese zvinoshandiswa, uzviise mumafolda, gadzira yako iCloud account, email application, sarudzo yekumisikidza sarudzo ... Maitiro anowanzo kunetsa kana iwe uchida kutanga kushandisa yako nyowani iPhone nekukurumidza sezvazvinogona. Zvakanaka, unogona kusevha zvese izvi, uye zviri nyore kwazvo.
Kubva kuburitswa kweIOS 12.4, zviri nyore kupfuura nakare kese kuendesa data rese kubva kune imwe iPhone kuenda kune imwe, pasina kuibatanidza kuTunes, pasina kumirira iyo data rese kurodha pasi kubva kuICloud. Unogona kuumbiridza yako yekare iPhone mune nyowani, uye iri semi-otomatiki maitiro atinotsanangudza pazasi.
Kuti uite iyi maitiro isu tinoda yako yekare iPhone, iyo yaunoda kuumbiridza, uye iyo nyowani iPhone yaunoda kuendesa iyo data rese. Iyo yekupedzisira inofanirwa kunge isinga gadziriswe neiyo yakasarudzika isina chinhu yekutanga skrini umo "Mhoro" inogona kuverenga mumitauro yakati wandei.
Isa maPhones maviri padhuze nepadhuze. Kana vaine bhatiri repasi, zvirinani ubatanidze ivo varipo, kunyangwe zvisiri zvakakosha, zvinokurudzirwa.
Tanga maitiro ekugadzirisa eiyo iPhone nyowani, sarudza mutauro waunoda kushandisa.
Iwindo rinowoneka pane yako yekare iPhone richiratidza mukana wekuishandisa kugadzirisa iyo nyowani iPhone, tinya pa "Enderera»
Iwe uchafanirwa kutora iyo yekare iPhone uye kuongorora nekamera yako gore remapoinzi anowoneka pachiratidziro cheiyo iPhone nyowani, nenzira yakafanana neiyo inoshandiswa neApple Watch.
Iyo otomatiki yekumisikidza maitiro ichatanga.
Iye zvino unofanirwa kutarisa iyo iPhone nyowani, nekuti panguva dzakasiyana iwe uchafanirwa kuisa imwe data, senge yekuvhura password yeiyo yekare iPhone, kana iCloud password yeakaunzi yako. Iwo matanho ekuchengetedza ekudzivirira chero munhu kubva nyore kuumbiridza yako iPhone. Kana izvi zvangoitwa, kuchinjiswa kwedata kubva kune imwe iPhone kuenda kune imwe kunotanga, maitiro ane nguva inoenderana nehuwandu hwe data rinofanirwa kuchinjiswa.. Muchiitiko changu yaive maminetsi makumi maviri neshanu, mushure meizvozvo ndaive nemaPhones maviri aine zvirimo zvakafanana. Iyo inototamisa yako Apple Watch kune yako nyowani iPhone.
Maitiro aya anogona zvakare kuitiswa netamboinova yakanaka kana iwe uine yakaderera kumhanya internet kubatana, asi parizvino hapana Mheni kune Mheni tambo, saka iwe uchazoda USB-Mheni adapter uye iyo USB kune Mheni tambo kubva kune yako iPhone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 13 » Maitiro ekuchinjisa data kubva kune imwe iPhone uchienda kune imwe
Nezve aya matanho eruzivo kubva kune yekare iPhone kuenda kune imwe nyowani, ndinofanira here kuva ne2 akafanana maSIM (imwe mune imwe nharembozha)?
Fernando P. akadaro
Panguva ipi pandinochinja iyo SIM kadhi kune iyo nyowani foni
Pindura Fernando P.
Panguva ipi iyo SIM kadhi inofanirwa kuchinjirwa kunhare nyowani?
Mune ino sarudzo yekuchinjisa, chii chinoitika kune ese whatsapp ekare mafoni? Dzakapidigurwa zvachose here kana newewo unofanirwa kuita yako backup ye WA?
Ikopi chaiyo inogadzirwa
Darika ese maemail, kunyangwe iwo ebhizinesi?
Maitiro ekuvandudza maapps pa iPhone ne iPad neIOS 13
IPhone 11 Pro Max ongororo: Apple inotipa izvo zvatakakumbira